Tirada kiisaska COVID-19 oo ku dhow 3 milyan oo qof
Tirada kiisaska COVID-19 ee caalamka oo dhan ayaa sii kordheysa taasi oo haatan dhaaftay 2,800,000 oo qof, iyadoo dadka cudurkan u geeriyooday ay ka badan yihiin 197,000 oo qof.
Waxaa sii kordhaya kiisaska cudurka Coronavirus markab kuwa dalxiiska ah oo laga leeyahay Talyaaniga, kaasi oo ku sugan xeebaha dalka Japan.
Markabka oo lagu magacaabo Costa Atlantica ayaa waxaa saaran oo kali ah shaqaalaha markabka waxaana uu ku sii jeeday Shiinaha oo lagu dayactiri lahaa, laakiin waxaa loo weeciyay Nagasaki horraantii sanadkan.
Saraakiisha gudaha ee Japan ayaa ku waramaya in ugu yaraan 91 qof oo ka mid ah shaqaalaha markabka laga helay COVID-19, iyadoo mid ka mid ahna la dhigay cisbitaalka.
Dhanka kale, Mareykanka oo ah dalka soo wariyey tirada ugu badan ee kiisaska coronavirus ayay haatan dadka uu sii ritay ku sii siqayaan hal milyan oo qof iyadoo dad ku dhow 52 kun oo qofna ay cudurka u geeriyoodeen.
Inkastoo tirada kiisaska iyo tan dhimashaduba ay sii kordhayaan hadana dhowr gobol oo Mareykanka ah ayaa Jimcadii dib u furay ganacsiyada qaar.
Qaar ka mid ah milkiilayaasha ganacsiyada ayaa sheegay in inkastoo ay wajahayaan xaalad adag oo dhaqaale ay u arkaan in ay wali waqti hore tahay in ay furaan ganacsiyadooda taasi oo keeni karta bey yiraahdeen sare u kaca kiisaska coronavirus.